कुन हो संसारकै सुपर पावर जनावर ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
प्रकाशित मिति : २०७३ असार ४
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीसँगै विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो र लामो समय शीतयुद्धकालको अवस्थाबाट गुज्रिन पुग्यो । सोभियत संघको विघटनसँगै विश्वमा साम्यवादी खेमा कमजोर बन्न पुग्यो । पुँजीवादी खेमा मजबुत मात्रै बनेन उसको संसारमा एकलौटी नै चल्यो । आजपनि अमेरिका विश्वको सुपर पावर हो । कसैले रसियालाई सुपरपावरको रुपमा लिन्छन् भने चीन पनि अहिलेको उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्र हो । पछिल्लो समयमा रुस, चीनलगाउतका देशहरु अमेरिकासँग टक्कर लिन सक्षम बनेका छन् । आर्थिक विकासको हिसाब गर्ने हो भने अहिले विश्व बजारमा छाएको चीन धेरै अघि बढिसकेको छ । उसले पछिल्ला वर्षहरुमा रक्षा बजेटमा भारी मात्रामा वृद्धि गरेको छ ।
सिंह विरालो प्रजातिको जनवारमध्ये सबैभन्दा ठूलो जनवार हो र यसको सामान्यतया तौल २ सय ५० केजी सम्म हुन्छ । प्राचीन समयमा यो अफ्रिका, उत्तरी अफ्रिकादेखि युरेसिया हुँदै ग्रिस, दक्षिणपूर्वी युरोप र भारतीय उपमहाद्वीपमा अत्याधिक पाइन्थ्यो । तपाईहामीलाई सुन्दै अचम्म लाग्नसक्छ तर आजभन्दा १ हजार वर्षअघि मानिसपछि सबैभन्दा धेरै क्षेत्रमा पाइने स्तनपायी प्राणी थियो । सिंह १७ हजार वर्षपहिलेको पाषाणकालीन समयदेखि निरन्तर अस्तित्वमा रहेको प्राणी पनि मानिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा सिंहको संख्यामा कमी आउनुका साथै चिढियाखानामा सीमित हुन पुगेका पनि कतिपय उदाहरणहरु नभएका होइनन् ।
यसको शिकार समात्ने सम्भावना करिब शत प्रतिशत हुने गर्छ । यसको सबैभन्दा खतरनाक हतियार यसको शक्ति नभएर गति हो । यसैवर्ष मार्चमा छापिएको एक अनुसन्धानको रिपोर्टअनुसार आफ्नो शिकारमाथि यस सर्पको हमलाको समय ४४ देखि ७० मिलिसेकेण्ड हुन्छ । यसबाट नै तपाई यसले कति छिटो शिकारमाथि आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने अन्दाज अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ जबकी तपाईको आँखा झिम्काउन पनि २०० मिलिसेकेण्ड लाग्ने गर्छ । यो समयमा कुनै सर्पले आफ्नो शिकारमाथि चार पटक आक्रमण गरिसकेको हुन्छ । यो गति हाम्रो कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा हो । हामीले कुनैपनि अंग जति छिटो चलाउन सक्छौं त्यसको केही गुणा तिव्र गतिमा सर्पले आफ्नो शिकारमाथि आक्रमण गर्छ । यदि हामीले सर्पजस्तै तिव्र गति देखाएमा हामी ढल्न सक्छौं किनकी हाम्रो मस्तिष्कले यति तिव्र गतिलाई सहने सामथ्र्य राख्दैन ।
अमेरिकाको लुसियाना विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डेभिड पेनिङले सर्पको बारेमा धेरै अनुसन्धान गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सर्पको आक्रमणमा शिकारको बाँच्ने सम्भावना करिब करिब असम्भव हुन्छ ।’ उनले महिनौसम्म अमेरिकी रेटलस्नेकको शिकार गर्ने तरिकालाई अवलोकन गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन उनले संसारकै विषालु र विष बिहीन सर्पको बारेमा पनि सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई लाग्छ कि हामीले सर्पले जतिपटक शिकारमाथि हमला गरेपनि हामीलाई हमला नगरेजस्तो लाग्न सक्छ ।’
अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता डेभिड पेनिङ भन्छन्, ‘सर्पले ३० जी (गुरुत्वाकर्षण पावर) सम्म तिव्र गतिमा आफ्नो शिकारमाथि आक्रमण गर्छ । पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्ति ९.८ एम÷एक स्क्वायर हुन्छ । यसको मतलब यो हो कि कति तिव्र गतिमा पृथ्वीले हरेक वस्तुलाई आफ्नो गुरुत्वाकर्षण शक्तिले आफूतिर तान्छ त्यसको ३ गुणा तिव्र गतिमा सर्पले आफ्नो शिकारमाथि आक्रमण गर्छ । ८ ‘जी’ को गतिमा रहेको लडाकु विमानका पाइलटले सुन्नमा लगाउँछ । जबकी यो समयमा लडाकु विमान तिव्र गतिमा हावामा पुगिसकेको हुन्छ । यही रफ्तार १० ‘जी’ मा पुग्यो भने पाइलट नै अचेत बन्ने डर हुन्छ । तर सर्पले यसको पनि तीन गुणा तिव्र गतिमा शिकारमाथि हमला गर्न सक्छ ।
किनकी कुनै समयमा फुर्तीका साथ आक्रमणमा अघि सरेको सर्पले पछि हट्नुपर्ने समेत हुन्छ । यस अवस्थामा उसले आफू र आफ्नो गतिलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्छ होला ? यो अनुसन्धानकै विषय हो । ताकी यसबाट मानिसले समेत फाइदा लिन सकोस ।